नयाँ प्रविधीअनुसार पठपाठनको सम्भावना (जिशिअसँगको कुराकानी) सुर्खेतका ५ वटा विद्यालयहरुलाई सुचनामैत्री बनाउन लागिएको छ । सुर्खेत उपत्यकाका बाहिरका विभिन्न पाँच वटा विद्यालयहहरुलाई सुचनामैत्री बनाउन लागिएको हो ।शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लाका पाँच वटा विद्यालयहरुको नाम पठाउन भनेको भन्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारी जित बहादुर शाहले विशेष गरेर सुर्खेतका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुको नाम पठाउने तयारी गरेको बताउनुभयो ।
सुर्खेतका ५ वटा विद्यालयहरुलाई सुचनामैत्री बनाउन लागिएको छ ।
सुर्खेत उपत्यकाका बाहिरका विभिन्न पाँच वटा विद्यालयहहरुलाई सुचनामैत्री बनाउन लागिएको हो ।शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लाका पाँच वटा विद्यालयहरुको नाम पठाउन भनेको भन्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारी जित बहादुर शाहले विशेष गरेर सुर्खेतका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुको नाम पठाउने तयारी गरेको बताउनुभयो ।
उहाका अनुसार अब सुर्खेतका विद्यालयहरुकालाई प्रविधिमैत्री बनाउन ढिला गरिने छैन । यसअघि पनि सुर्खेतका विभिन्न विद्यालयहरुले प्रविधिमैत्री स्माट कक्षा शूरु गरिसकेका छन् ।
अमर ज्योती नमुना उच्च माध्यामीक विद्यालय लगायतले प्रविधियुक्त कक्षा शुरु गरिसकेका छन् ।
परिवर्तिनसँगै विद्यालयलाई पनि आधुनिक बनाउँनुपर्ने मागहरु आइरहेको बेला सुर्खेतमा पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो ।
सुर्खेतका विद्यालयहरुलाई नयाँ तरिकाले तथा नयाँ प्रविधीअनुसार पठपाठनको सम्भावना कत्तीको छ ? यसमा जिल्ला शिक्षाले के गरिरहेको छ ? लागायतका विषयमा जागरणकर्मि करिष्मा चौधरीले जिल्ला शिक्षा अधिकारी जित बहादुर शाहसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
प्रस्तोता ः विद्यालय प्रविधिमैत्री बन्नु कत्तिको आवश्यक छ ?
अतिथि ः आईटी एकदमै छिटो छिटो विकास भयो । स्कुलहरुमा अति आवश्यक छ । स्कुलहरुमा आईटी भित्र्याउन सकेनौ भने हाम्रो आवश्यक्ता एकातिर स्कुलको पठनपाठन अर्कोतिर हुन्छ । जसले गर्दा पठनपाठन जिवन उपयोगी हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
प्रस्तोता ः विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भुमिका कस्तो हुन्छ ?
अतिथि ः शिक्षकका पेशागत विकास संग सम्बन्धित तालिममा आईटीका कुराहरु, हरेकले मेल खोल्ने कुराहरु, कम्प्युटर सिक्ने कुरा अगाडी बढाईरहेका छौँ । धेरै विद्यालयमा कम्प्युटर खरिद तथा ब्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पनि कार्यक्रम अगाडी बढाएको छ । यसका साथै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर पु¥याउने लक्ष्यका साथ अगाडी गतिविधि गरिरहेका छन् । तर देखिदो मात्रामा आईटीको विकास जस्तै छिटो विकास गर्न सकेका छैनौ यो काम सुस्त सुस्त भैरहेको छ । केही वर्ष भित्रै कम्प्युटर नहुने स्कुल हुँदैनन् त्यस्तो लाग्छ मलाई ।
प्रस्तोता ः प्रविधि नयाँ भित्रिसक्यो तर विद्यार्थी पढाउने शैलि परिवर्तन हुन नसक्दा विद्यार्थीको पढाईप्रतिको लगाव कम भैरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ ?
अतिथि ः अहिलेका बालबालिकालाई डिजिटल एजका बालबालिका भन्छ हैन । तर यो ट्रान्जिसनल पिरियड भयो । यति तिब्र विकास भयो की आईटी को यलाई हामीले राम्रो सँग ग्रहण गरेर राम्रो सँग समन्वय गरेर विद्यालयको पठनपाठन बढाउन नसकेको अवस्था छ । यतीबेला ब्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । पुराना शिक्षकहरुले आईटी सम्बन्धिको स्किल नसिकेको अवस्था छ । जसले गर्दा बालबालिकाहरु घरमा मोबाईल चलाउँछ, टीभि हेर्छ । बजारमा गएर कम्प्युटर देख्छ र स्कुलमा जाँदा कम्प्युटर नदेख्दा आईटीको क्लास मन नपर्नु वा नरमाईलो हुनु स्वभाविक हो ।
त्यही भएर जति सक्यो छिटो भन्दा छिटो बजेटका योजनाहरु अघि बढाएर, हामीले हरेक विद्यालयमा हरेक कक्षाकोठामा कम्प्युटरको ब्यवस्था हुने, आईटीको ब्यवस्था हुने, त्यो सम्बन्धि स्किल भएका शिक्षकको ब्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुरा अघि बढेको छ । आशा गरौँ अब हामीले केही वर्ष भित्रै, केही समय भित्रै हाम्रा विद्यालयहरु एकदम आईटीयुक्त हुनेछन् । हाम्रा शिक्षकहरु एकदमै सीप युक्त हुनेछन् जसले गर्दा हाम्रा बालबालिका र विधार्थीहरुले त्यो प्रकारको सीप त्यो प्रकारको दक्षता हासिल गर्ने अवसर पाउने छन् । र हाम्रा कलासहरु प्रविधिमैत्री हुनेछन् ।
प्रस्तोता ः विद्यालयमा कम्प्युटर थोरै र विद्यार्थी धेरै हुन्छन् यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरुले कसरी सिक्ने ?
अतिथि ःगरिव देशको शिक्षाका गतिविधि यस्तै हुन् । जति हामीलाई ब्यवसायीक शिक्षा चाहिन्छ भन्छौ तर हामी लगानी गर्न सकिरहेका छैनौ । सरकारले पनि लगानी गर्न सकिरहेको छैन यद्यपी शिक्षामा अर्वौ लगानी भएको छ भन्छौ तर शिक्षकको तलवमै बढी गएको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी रकम तलबमै जान्छ ।